Bit By Bit - Ny fandinihana ny fitondran-tena - 2.3.2.6 Dirty
Big angon-drakitra azo loharano feno tratran'ny mpanara sy ny spam.
Ny mpikaroka sasany mino fa loharanom-baovao angon-drakitra lehibe, indrindra fa ireo avy amin'ny loharanom-baovao ety anaty aterineto, dia madio mangalahala satria nanangona ho azy. Raha ny marina, ny olona izay efa niara-niasa tamin'ny angon-drakitra lehibe loharanom-baovao mahafantatra fa maloto izy ireo matetika. Izany hoe, izy ireo matetika ahitana tahirin-kevitra izay tsy maneho zavatra tena mahaliana ny mpikaroka. Maro ny fiaraha-monina ny mpahay siansa no efa zatra ny dingana amin'ny fanadiovana goavana ara-tsosialy Ny valin'ny fandinihana natao, fa manadio lehibe angon-drakitra loharanom-baovao dia sarotra kokoa noho ny antony roa: 1) dia tsy namorona ny mpikaroka ho an'ny mpikaroka sy 2) ny mpikaroka amin'ny ankapobeny no tsy fahatakarana ny fomba ary ireo.
Ny loza ateraky ny maloto nomerika soritry dia aseho amin'ny alalan'ny antontan-kevitra sy ny mpiara-miasa aminy Back ' (2010) fianarana ny valin-pihetseham-po ny fanafihana Septambra 11, 2001. matetika ny mpikaroka mandalina ny valin'ny zava-nitranga loza fampiasana retrospective angon-drakitra nangonina ny volana na taona maro mihitsy aza. Nefa, sy ny mpiara-miasa Miverina nahita foana-eo amin'ny loharanom-dizitaly soritra-ny timestamped, tonga dia voarakitra hafatra avy amin'ny 85.000 Amerikana fitaovana fandraisana antso maika-ary izany afaka ny mpikaroka mba hianatra valin-po amin'ny be timescale mpanao an-idina. Miverina sy ny mpiara-miasa namorona minitra-by-minitra fihetseham-po fizotry ny Septambra faha-11 amin'ny alalan'ny Coding ny fihetseham-po afa-po ny Pager hafatra avy ny isan-jaton'ny teny mifandray amin'ny (1) alahelo (ohatra, niantso, alahelo), (2) fanahiana (ohatra, manahy, saro-tahotra), ary (3) fahatezerana (ohatra, fankahalana, mitsikera). Ary nahita fa ny alahelo sy ny fanahiana fluctuated mandritra ny andro tsy misy mafy modely, fa nisy fitomboana miavaka amin'ny fahatezerana mandritra ny andro. Izany fikarohana toa mahafinaritra fanoharana momba ny herin'ny foana-on angon-drakitra loharanom-baovao: mampiasa fitsipika fomba dia ho sarotra ny hanana toy izany avo-résolution fizotry ny avy hatrany valin'ny zava-nitranga tsy nampoizina.
Herintaona monja tatỳ aoriana anefa, Cynthia Pury (2011) nijery ny tahirin-kevitra amim-pitandremana kokoa. Izy nahita fa maro be ao amin'ny lazaina fa tezitra hafatra dia niteraka iray tokan-tena Pager ary izy rehetra mitovy. Ity no lazaina fa tezitra ireo hafatra hoe:
"Reboot NT milina [anarana] amin'ny governemanta [anarana] ao amin'ny [toerana]:-dehibe: [daty sy ny ora]"
Ireo hafatra ireo, satria misy soratra hoe tezitra izy ireo tafiditra ny teny hoe "mitsikera", izay mety ankapobeny dia mampiseho hatezerana nefa tsy amin'ity tranga ity. Fanesorana ny hafatra niteraka ity automated tokana Pager manala tanteraka ny toa fitomboan'ny fahatezerana noho ny Mazava ho azy fa ny andro (Sary 2.2). Amin'ny teny hafa, ny tena vokatra any Back, Küfner, and Egloff (2010) i artifact iray Pager. Rehefa avy amin'io tantara io, somary tsotra fanadihadiana ny somary sarotra sy mahafantatra ny korontana rakitra manana ny hery anaty mba handeha ho zava-dehibe ratsy.
Figure 2.2: tombanana fironana amin'ny fahatezerana nandritra ny Septambra 11, 2001 mifototra amin'ny 85,000 Malagasy fitaovana fandraisana antso maika (Back, Küfner, and Egloff 2010; Pury 2011; Back, Küfner, and Egloff 2011) . Tany am-boalohany, Back, Küfner, and Egloff (2010) dia nitatitra ny fomba fahatezerana mitombo mandritra ny tontolo andro. Na izany aza, ny ankamaroan 'ireo hafatra ireo tezitra toa niteraka iray tokan-tena Pager fa imbetsaka nandefa hafatra manaraka ity: "Reboot NT milina [anarana] amin'ny governemanta [anarana] ao amin'ny [toerana]:-dehibe: [daty sy ny ora]". Miaraka io hafatra io nesorina, ny toa fitomboan'ny tezitra intsony (Pury 2011; Back, Küfner, and Egloff 2011) . Io tarehimarika dia fandikana ny Fig 1B in Pury (2011) .
Raha maloto namorona tahirin-kevitra izay tsy nahy-toy ny avy amin'ny iray mitabataba Pager-mety ho hita amin'ny alalan'ny fikarohana ny antonony tsara, misy ihany koa ny sasany izay misarika ny rafitra an-tserasera iniana spammers. Ireo spammers mavitrika hiteraka sandoka tahirin-kevitra, ary-matetika no atosiky ny tombony-miasa mafy mba hitandrina ny spamming miafina. Ohatra, ny asa ara-politika ao amin'ny Twitter toa ahitana, fara fahakeliny, ny sasany amin'ny spam be pitsiny ara-drariny, izay antony ara-politika ny sasany dia fanahy iniana atao ny mijery malaza kokoa noho izy tena ireo (Ratkiewicz et al. 2011) . Mpikaroka miasa miaraka amin'ny tahirin-kevitra izay mety misy iniana amin'ny spam hiatrika ny zava-tsarotra ny mandresy lahatra ny mpanatrika fa efa tsikaritra dia nesoriny tsy manan-danja spam.
Farany, izay heverina angon-drakitra maloto dia afaka miankina amin'ny fomba kolaka eo amin'ny fikarohana fanontaniana. Ohatra, maro ny fanovana ny Wikipedia dia noforonin'ireo automated bots (Geiger 2014) . Raha toa ianao ka liana amin'ny tontolo iainana ny Wikipedia, dia ireo no zava-dehibe bots. Fa, raha liana amin'ny fomba olona mandray anjara amin'ny Wikipedia, ireo fanovana atao amin'ny bots ireo dia tokony ho voailika.
Ny fomba tsara indrindra mba tsy ho voafitaky ny maloto antontan-kevitra ireo ny hahatakatra ny fomba ny angona noforonina mba hanao fanadihadiana exploratory tsotra, toy ny fanaovana aelezo tsotra manao hevi-dratsy.